Amanyathelo okutshintsha amanzi e-aquarium | Ngeentlanzi
Nangona kunjalo tshintsha amanzi i-aquarium yinkqubo elula, inyani ayisiyiyo yonke into ebengezelayo igolide, ukuze iintlanzi zikwimeko efanelekileyo akuyi kwanela ukususa ulwelo esele lukhona kunye nokudibanisa entsha. Endleleni kufuneka sithathe uthotho lwamanyathelo, sibeke umgudu okhethekileyo kuwo onke.
Kufuneka kukhunjulwe ukuba amanzi yindawo apho izilwanyana zihlala khona, kwaye ziya kuchitha khona iiyure ezingama-24 ngosuku. Ngokuhamba kwemizuzu, ukungcola kuya kubonakala, okunokubangela ukungonwabi ngakumbi. Uluvo oluphambili kukufumana kucoca i-sublime, ngaphandle kwesi sizathu kufuneka sisebenzise iphedi yokukhwela ukuze yonke indawo ikhanye.
Nazi i amanyathelo kufuneka ulandele ukutshintsha amanzi:
Ukucoca amanzi kwi-aquarium kancinci. Malunga ne-20%, ngaphezulu okanye ngaphantsi.
Fumana amanzi amatsha. Ayifanelanga ukuba nezinto zamachiza (zilahle ezo zikhongozeli bezikhe zawa kuzo ngaphambili) okanye zisuka kwimpompo. Kuyacetyiswa ukuba iphumle iiyure ezimbalwa ukuze ezo zimbiwa zishiyekileyo.
Nge-algae scraper, coca iikristali. Izinto kufuneka zisuswe kwaye zicocwe ngamanzi kunye ne-10% ye-bleach. Ukuzihlambulula kwaye uzivumele zome umoya kubalulekile. Amatye kufuneka nawo ahlanjululwe nge-siphon. Ubumdaka kufuneka bugcinwe kwesinye isikhongozeli.
Xa yonke into icocekile, yongeza amanzi amatsha. Qiniseka ukuba bubushushu obufanayo nobakudala.
Chaza ukuba zikhona herramientas ekhethekileyo yokucoca. Ungabafumana nakweyiphi na ivenkile yezilwanyana. Unokufumana iingcebiso njengesipho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Ii-Aquariums ze-DIY » Enye indlela yokutshintsha amanzi e-aquarium